Isbeddel Lagu Sameeynayo Hanaanka VAR Ee Premier League-ga Xilli-cayaareedka Xiga – Garsoore Sports
Isbeddel Lagu Sameeynayo…
Isbeddel Lagu Sameeynayo Hanaanka VAR Ee Premier League-ga Xilli-cayaareedka Xiga
Guddiga Saraakiisha Ciyaarta Xirfadleyda (PGMOL) ayaa soo bandhigi doona isbaddallo muuqda oo ku aaddan adeegsiga VAR ee xilli ciyaareedka soo aaddan kaddib markii aaladda garsoore caawiyaha ay dhaleeceyn la kulantay labadii sano ee la soo dhaafay.
Madaxa garsoorayaasha Premier League-ga Mike Riley ayaa shaaca ka qaaday in ciyaartoyda la siin doono faa’idada shakiga, maadaama goolasha la dhihi doonin waa offside marka cidiyaha iyo ama sanka uu qeyb ka yahay.
Horyaalka Premier League ayaa hirgelin doona isbeddel lagu sameeyo qaabka VAR u fasirto sharciga offside-ka ama garab-dhaafka xilli ciyaareedka cusub kaddib markii lagu guuleystay nidaamkan tartankii qaramada Yurub ee Euro 2020.
VAR ayaa ah isha ugu weyn ee doodda cayaarta dhexdeeda tan iyo markii la bilaabay in lagu isticmaaalo horyaalka Premier League-ga, iyada oo dhowr eegmo oo muran leh lagu sameeyay muuqaal caawiyaha garsoore (VAR) iyadoo la adeegsanayo nidaam u gaar ah.
Mid ka mid ah meelaha ugu badan ee walaaca laga qabo waa sharciga garab-dhaafka (offside-ka). laakiin xilli ciyaareedkan, Premier League wuxuu adeegsan doonaa khadad dhumuc leh si go’aan looga gaaro xariiqa offside-ka, inkastoo aan weli la hubin inta ay le’eg yihiin khadadka ama nooca uu qaadan doono horyaalku.
Si kastaba ha ahaatee, tallaabadani waxay keenaysaa in tabiyayaasha aanay arki karin hannaanka go’aannada offside-ka loo gaarayo iyadoo garsoorayaasha uun ay ku koobnaan doonto.
Chelsea Oo Weli Daba Taagan Sidii Ay Wiilkeedii Hore Kusoo Ceshan Lahayd
Koox Premier League-ga Ka Cayaarta Oo Dooneeysa Xiddigii Hore Ee Arsenal -Waa Tee Kooxdaas?